Ny iPad 10,5-inch dia hanana vahaolana avo kokoa saingy ny hakitroky ny pixel mitovy amin'ny 9,7 iPad Pro | Vaovao IPhone
Ny iPad 10,5-inch dia hanana vahaolana avo kokoa saingy ny hakitroka pixel mitovy amin'ny 9,7 iPad Pro
Herinandro lasa izay dia nanambara ny datin'ny iray amin'ireo fihaonambe nandrasana indrindra ho an'ireo mpampiasa Apple i Apple, ny daty nanombohany ankalazaina ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny kinova vaovao an'ny iOS, tvOS, macOS ary watchOS. Ny WWDC, World Conference for Developers ho an'ny fanafohezana azy amin'ny teny Anglisy, no basy fanombohana ho an'ny mpamorona sy ny mpampiasa beta ho an'ny daholobe hanombohana ny fampifanarahana ny fampiharana azy ireo na, raha tsy nahomby izany dia niara-niasa tamin'i Apple hanatsara ny fiasa sy ny fitoniana ao amin'ny rafitra.
Ireo fihaonambe ireo dia atao amin'ny volana Jona, saingy volana vitsivitsy talohan'izay dia matetika i Apple no manao Keynote iray hafa izay manolotra ny fanavaozana ny sasany amin'ireo fitaovany. Andro vitsivitsy sisa haharitra hatramin'ny volana martsa dia mbola tsy nanambara tamin'ny fomba ofisialy i Apple raha mandritra ny volana martsa dia hanana Keynote izay araka ny tsaho farany, iPad dia handray mpikambana vaovao, fitaovana iray mety hanana efijery 10,5-inch nefa mitazona ny habeny mitovy amin'ny iPad 9,7-inch. Mba hanaovana izany, Apple dia hampihena ny sisin'ny efijery.
Ny tsaho farany mifandraika amin'ity fitaovana ity ary navoakan'ny Forbes, dia manambara izy ireo ny famahana ity iPad 10,5-inch vaovao ity dia hanana vahaolana 2.224 x 1.668 teboka Ny iPad Pro 9,7-inch dia manana famahana 2.048 × 1.536. Izay tsy hiova amin'ity publication ity dia ny hakitroky ny pixel izay hitovy amin'ny maodely roa, teboka 264 isaky ny santimetatra. Teo aloha, tsaho hafa nilaza fa ity maodely 10,5-inch ity dia afaka manome ny vahaolana mitovy amin'ny iPad Pro 12,9-inch, saingy tsy azo atao izany amin'ny matematika.
Andro vitsy lasa izay dia nanako ny tsaho hafa mifandraika amin'ity maodely iPad ity izay nanipika fa hatramin'ny Mey na Jona dia tsy ho hita eny an-tsena izy ireo, izay Izy io dia hanery ny orinasa hanemotra ny fampisehoana mandra-pahatongan'ny WWDC Keynote.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny iPad 10,5-inch dia hanana vahaolana avo kokoa saingy ny hakitroka pixel mitovy amin'ny 9,7 iPad Pro
Mikasa ny hividy Pocket i Mozilla ary hisintona ireo mpampiasa 10 tapitrisa ao aminy
Ny taranaka fahefatra Apple TV Jailbreak dia efa havoaka